Honduras inokwezva vashanyi vekunze nhimbe nyowani yekushanya
Location: musha » Kutumira » Enda » Honduras inokwezva vashanyi vekunze nhimbe nyowani yekushanya
Honduras Institute of Tourism (IHT) yazivisa nhasi chayo chitsva mushandirapamwe wekushanya uyo unoratidza kusiana kwakapararira kwenyika nezvose zvinopa vashanyi vekunze kuti vaone. Iine vhidhiyo yemaminetsi maviri inotora vafambi parwendo kuenda kuHonduras 'hupfumi hwakanakisa, mushandirapamwe wedhijitari unotarisira kukwidziridza ruzivo rwechiratidzo uye kudzidzisa vangango famba yezviitiko zvakakomberedzwa zvavanogona kuwana munyika.
Chinhu chakakurumbira pamushandirapamwe uyu, vhidhiyo inofungidzirwa nekugadziriswa nesangano Saatchi & Saatchi, inotevera murume wechidiki anonzi Henry uyo anotanga kushanyira Honduras kunonyura muBay Islands yenyika inozivikanwa. Shamwari yake yekudonha anobva amuunza kumapako eHonduras uye Henry anotanga rwendo rwusingamire munyika yese, achiziva kuti pane zvakawanda zvinowanwa. Anoshanyira zviratidziro zvemunyika uye anosangana nevanhu vanogamuchira avo vanobva vamuzivisa kunzvimbo yake inotevera yeHonduran. Kubva pakunakirwa kofi ichangoburwa-patsva, Honduran yakasimwa kofi muMarcala uye kushanya kuCopán Ruins, kuenda kuzipfuura neLa Campa uye kutarira shiri muRío Plátano Biosphere Reserve, Henry anoedza kuzviita zvese. Chekupedzisira, kana angokwira kudzokera kumba uye pakutanga agutsikana nepfungwa yekuti akange aongorora Honduras yese, mushandi weendege anoyeuchidza Henry kuti pane zvimwe zvekuona. Anofunga kugara muHonduras kuti anyatsozviona, ndokusaka zita remushandirapamwe "Haugone Kubva Honduras Pasina Kunyatsoziva Honduras."
“Mushandirapamwe wedu uchangoburwa wakagadzirirwa kuratidzira pasi rose Honduras mukunaka kwayo nekubwinya kwaro. Nyika yedu inozvirumbidza pazviitiko zvega-zvega, uye vhidhiyo iyi inopa kuratidzwa kunokwezva kwezvishamiso zvisingazivikanwe zvakamirira kuwanikwa nevafambi, "akadaro Gurukota reHonduras Institute of Tourism - Mutungamiri Emilio Silvestri. "Tine chivimbo chekuti kuburikidza nemushandirapamwe uyu ticharamba tichiwedzera chikamu chekushanya kweHonduras, zvichitisiyanisa kure nedzimwe nzvimbo dziri pedyo."
Mushandirapamwe mutsva wekushanyirwa uchaparurwa manhamba kuburikidza nevezvenhau uye kuburikidza nehukama neruzhinji kuyedza vateereri muNorth America, Central America uye sarudza misika yeEurope.
Central America Honduras ushanyi
Chitsuwa chinoshanyira vashanyi veChinese munzira yekusimudzira kwakasimba
Avolon anorayira ndege zana kubva kuAirbus
Nyaya Dzesviro Dzidziso Kuv Hotel
Kurapwa Kutsva Nemuromo Kwatenderwa Kune Active Ulcerative...
Ukraine Inochema kuMarriott, Hilton, IHG, Accor, Mhepo ...
Pakistan Tourism Development Corporation iri kupomerwa mhosva ...
Air Taxi, Drone Delivery - vakawana mari ikozvino